धर्म दर्शन Archives - Emakalu Online
बनस्पतीय कोटीहवन सहितको बहुधार्मिक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रमको तयारी तिब्र (भिडियो सहित)
खाँदबारी । श्री हरी आध्यत्मिक गुरुकुलको आयोजनामा १०८ कुण्डमा बनस्पतीय कोटी हवनको तयारी तिब्र भईरहेको छ । माघ २७ गतेबाट सुरु हुने बहुधार्मिक तथा साँस्कृतिक साँस्कृतिक कार्यक्रमको तयारी तिब्र भईरहेको हो । हाल कुण्ड निर्माणको काम भईरहेको छ भने यस लगत्तै मञ्च निर्माणको कार्य योजना रहेको गुरुकुलका संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । नेपालमै पहिलो पटक सुरु गरिएको बनस्पतीय कोटी हवनमा अ...
आजको राशिफल (वि.सं. २०७६ मंसिर १२ गते बिहीबार)
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) गरेका प्रयासमा ढिलै भए पनि सफलता आर्जन गर्न सकिने छ । सानो प्रयासले अड्डाअदालत वा प्रशासनका क्षेत्रमा रोकिएका काम अघि बढ्नेछन् । पहिले गरेका क्रियाकलापको मूल्याङ्कन र प्रशंसा हुनेछ । दिउँसोबाट भाग्य स्थानमा चन्द्रमा पुग्नाले परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा मन आकर्षित बन्नसक्छ । पारिवारिक समस्याहरू हल हुनेछन् । आजका लागि शुभअङ्क ९ र शुभरङ्ग गाढा पहेंलो वा केशर...
आजको राशिफल (वि.सं. २०७६ मंसिर ११ गते बुधबार)
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) सानातिना घरेलु काममै अल्मलिएर समय व्यतीत हुनसक्छ, सचेत रहनु होला । काममा केही चुनौती देखिए पनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक सङ्केत प्राप्त हुनेछ । सहयोगीहरूले अप्ठ्यारो समयमा साथ दिनाले चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सकिने छ । गोप्य रहस्य पत्ता लाग्नेछन् भने नसोचेको धन लाभ हुन सक्छ । स्वास्थ्यमा अलि कमजोरी अनुभूति हुन सक्छ । आजका लागि शुभअङ्क ४ र शुभरङ्ग ध्वाँसे हो भन...
पाँचथरमा फाल्गुनन्द लिङदेनको कर्मभूमि लब्रेकुटी धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै
पाँचथर । १६ औँ राष्ट्रिय विभूति तथा समाज सुधारक फाल्गुनन्द लिङदेनको कर्मभूमि लब्रेकुटी धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ ।फिदिम नगरपालिका–५ मा रहेकाे यो क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारको नजर परेसँगै पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको हो । पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा पर्यटक लक्षित पूर्वाधार निर्माणसँगै विभिन्न माध्यमबाट प्रचार–प्रसार भएपछि यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य...
पथरीमा सन्तोष कठायतले क्याम्पसका लागि मन्दिर निर्माण गरिदिने
पथरी । धार्मिक तथा सामाजिक कार्यका निम्ती कहिल्यै पछि नहट्ने सन्तोष कठायतले क्याम्पसका लागि मन्दिर निर्माण गरिदिने भएका छन । मोरङको पथरीशनिश्चरे ९ का कठायतले पथरी बहुमुखी क्याम्पसका लागि सरस्वतीको मन्दिर निमार्ण गर्ने भएका हुन । आउदो माघ १६ गते सरस्वती पुजामा उद्घाटन गर्ने उदेश्यले कार्तिक २३ गते शनिवार क्याम्पस प्राङ्गणमा एक कार्यक्रम गरि मन्दिरको शिलान्यास समपन्न भएको छ । लामो समय भारतीय सेनाम...
ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरमा १६ हजार किलो तामाको द्वार
ताप्लेजुङ। पाथिभरा मन्दिरमा तामा मात्र प्रयोग गरेर स्वागतद्वार बनाइएको छ । ‘भक्तजनको सामग्री, भक्तजनकै लागि’ भन्ने उद्देश्यले स्वागतद्वार निर्माण गरिएको हो । पाथीभरा मन्दिरमा भक्तजनले चढाएको तामाका माना, पाथी, त्रिशूल, दियोजस्ता सामग्रीलाई उजिल्याएर द्वार निर्माण गरिएको पाथीभरा देवी मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा संवर्द्धन समितिका अध्यक्ष तारानाथ घिमिरेले बताए । पाटनका राजन शिल्पकारद्वारा बनाइएको ...
आज काग तिहार मनाइदै
काठमाडौं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिनमा मनाइने काग तिहार पर्व आज यमराजको दूतका रुपमा कागलाई मीठो मीठो चीजविज खान दिएर मनाइँदैछ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीकै दिन सुरु हुने यमपञ्चक भने यस वर्ष तिथिको घटबढका कारण शुक्रबार बेलुकीदेखि नै शुरु भएको छ। शुक्रबार बेलुकी त्रयोदशी तिथि लाग्ने भएकाले यमपञ्चक शुरु गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। यसैगरी लक्ष्मीस्थिर राख्नका लागि ग...
धनकुटाका एक बालक १३ वर्षमै बने पुरोहित
धनकुटा । धनकुटा घर भएका एक बालक १३ वर्षमै पुरोहित बनेका छन् ।महालक्ष्मी नगरपालिका-४ चानुवाका १३ वर्षीय बालक टुवराज कोइराला हरेक कर्मकाण्डमा पोख्त, परिपक्व पुरोहित बनेका छन् ।गाउँघरका सबै ठाउँहरुमा अग्रज तथा परिपक्क पण्डितले झैं कर्मकाण्ड गर्ने उनले चानुवास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ४ सम्म अध्यायन गरेका थिए । संखुवासभाको मादीमा रहेको पुण्य हरिकुलमा संस्कृत पढिरहेका उनले वेद, रुद्री, ...
नेवार समुदायको पात्रो बहिष्कार, कारण यस्तो
काठमाडौं । नेवार समुदायले राष्ट्रिय पञ्चांग अर्थात् पात्रो बहिष्कार गरेको छ। तिहारमा नेवार समुदायले मनाउने स्वन्तिः को तिथि बिगारेको भन्दै पात्रो बहिष्कार गरिएको हो। राष्ट्रिय पञ्चांग निर्णायक समितिले ०७६ को तिहारमा पर्ने म्हःपूजा र नेपाल संवतलाई बेग्लाबेग्लै दिनमा राखेको छ। जबकि यी दुवै एकै दिन सम्पन्न गर्नुपर्ने नेवारी परम्परा छ। संस्कृतिविद् हरिराम जोशीका अनुसार तिथिलाई लहरै उल्लेख नगरी टुटा...
काठमाडौँ ।नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको शुभ साइत सार्वजनिक गरेको छ । समितिले तिहारका विभिन्न पर्वको निर्णय गर्दै भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतमले राससलाई जानकारी दिनुभयो । कात्तिक १२ गते मङ्गलबार बिहान ११ः५५ बजे भाइटीकाको साइत उत्तम रहेको उहाँले बताउनुभयो । कात्तिक १२ गते मङ्गलबार दिनभर टीका लगाउन बाधा नपरे पनि साइत खोज्नेका लागि अभिजित् मुहूर...